Development Network for Immigrants ─ ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန လူမှုရေးနှင့်မိသားစုဦးစီးဌာနမှ ရှေ့ဆက်တိုက်တွန်းသော လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့မှုလုပ်ငန်း
ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန လူမှုရေးနှင့်မိသားစုဦးစီးဌာနမှ ရှေ့ဆက်တိုက်တွန်းသော လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့မှုလုပ်ငန်း
Updated : 2017/12/6 下午 04:03:00
နေထိုင်သူသစ်နှင့် ၎င်း၏သားသမီး မတူကွဲပြားမှု လူမှုဖူလုံရေးလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန လူမှုရေးနှင့်မိသားစုဦးစီးဌာနမှ နေထိုင်သူသစ် ဒေသဆိုင်ရာလူမှုဖူလုံရေးစနစ်နှင့်ကွန်ယက်တည်ဆောက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများမှာအောက်ပါအတိုင်း
၁. အများပြည်သူ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်ရပ်ရွာလူထုဝန်ဆောင်မှုနေရာကို ထူထောင်ကာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအပန်းဖြေဖျော်ဖြေနေရာ၊ အဖွဲ့အစည်းလှုပ်ရှားမှုနှင့် စုံစမ်းမေးမြန်းဝန်ဆောင်မှုစသည်တို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
၂. အများပြည်သူ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ “နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်များ နေထိုင်မှုဆိုင်ရာလိုက်လျောညီထွေနိုင်ရန် လမ်းညွှန်သင်တန်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံဆက်နွယ်ခြင်းကို လိုက်လျောညီထွေနိုင်ရန်မြှင့်တင်ပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှု” နှင့် “ထောက်ခံအားပေးဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု” စသည့်လှုပ်ရှားမှုများ လုပ်ဆောင်ရန်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
၃. စုပေါင်းဘက်စုံဝန်ဆောင်မှုပေးရန် နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်/နေထိုင်သူသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာကိုတည်ထောင်ခြင်း။